Pudding mofomamy mofomamy akondro - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Pudding mofomamy amin'ny spaonjy banana
tsindrin-tsakafo36 minitraOlona 8295 kaloria
Ity tsindrin-tsakafo ity dia iray amin'ireo sakafo matsiro atolotra eo amin'ny latabatrao. Miaraka amin'ny Thermomix dia azonao atao ny manamboatra crème lavanila sy crème hifangaro amin'ny akondro mahasalama sy mamy.
Ity mofomamy pudding ity dia misy sosona maro. Izy io dia vita amin'ny sosona mofomamy mafy maro nolonaina tao anaty kafe, sosona crème pastry, iray hafa amin'ny crème kapoka ary ny sosona tena izy. akondro manta mba hahafahanao manandrana ity voankazo matsiro ity.
Tena mora ny manao izany ary haingana noho ny Thermomix izay mahatonga antsika hamorona fomba fanamboarana tsy misy ezaka lehibe. Ankoatra izany, ity tsindrin-tsakafo ity dia azo aseho amin'ny lovia hozaraina na amin'ny solomaso tsirairay ho an'ny vahiny. Ity ambany ity no ametrahanay horonan-tsary demonstrative miaraka amin'ny dingana manaraka ary aza adino ny antsipiriany.
1 Pudding mofomamy amin'ny spaonjy banana
Ity tsindrin-tsakafo matsiro ity dia manana sosona matsiro tsy manam-petra: brownies misy tsiron-kafe, fanosotra lavanila, akondro ary crème kapoka. Ho tianao ny fitambaran'izy ireo.
Fotoana hiketrehana: 6M
Katsaka katsaka 50 g
Soak ho an'ny biscuit
2 vera rano mafana
Koba azo levona 2 sotro fihinanana
Mofomamy spaonjy 300 g
Krim-kapoka 500 ml
Ao amin'ny vera Thermomix dia ampiana ronono manontolo 500 ml, tamenak'atody 4, siramamy 135 g, sotro lavanila ary 50 g ny katsaka. Manao fandaharam-potoana izahay mandritra ny 10 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 4. Rehefa nokapohina sy afangaro, dia asiana programa indray 6 minitra amin'ny 90 ° amin'ny hafainganana 3.
Hitanay fa napetraka tsara ny crème. Raha heverinao fa mila zavatra fanampiny izany, dia handamina azy mandritra ny minitra vitsivitsy izahay. Manampy ny 50 g ny dibera malefaka izahay ary mamerina programa hafa 20 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 3. Maka ny crème avy amin'ny vera izahay ary mametraka izany.
Ao anaty vilia iray dia ampidirintsika ny rano mafana 2 vera, ny siramamy roa sotro ary ny kafe roa sotrokely. Afangaroy tsara.
Ao amin'ny lovia efamira iray dia hametraka ny mofomamy voatoto ao anaty fangaro kafe isika. Fenoy ny fototra iray manontolo ary ampio ny sosona crème pastry. Avy eo dia hametraka ny silaka akondro isika ary farany dia asiana sosona mofomamy sponjy hafa nalona tamin'ny kafe.
Ao amin'ny vera madio dia mametraka ny lolo isika ary ampio ny 500 ml ny karavasy sy ny siramamy 110 g. Karavasy ny crème amin'ny alalan'ny fandaharana 50 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 3,5. Ny fotoana asehontsika dia manondro, miankina amin'ny hatsiaka ny crème izany. Mety ho ampy ny fotoana, fa mety haka fotoana bebe kokoa. Mila mitandrina ianao mba tsy hihozongozona be loatra.
Mandraraka ny crème voakapoka izahay mandrakotra ny mofomamy manontolo. Tsy ilaina ny malama tsara ny ambonin`ny, dia afaka mahita ny fihetsiky ny sotro mba ho rustic. Manao sombintsombiny amin'ny mofomamy izahay ary manamboatra ny mofomamy. Mba hanomanana azy dia azontsika atao mangatsiatsiaka mandritra ny 20 minitra eo ho eo mba hahafahantsika manapaka azy tsara kokoa. Na izany aza dia arosoy mangatsiaka be ilay izy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Postres » Pudding mofomamy amin'ny spaonjy banana
Mofomamy vita amin'ny crème sy crème millefeuille